အဖျားမြန်မြန်ပျောက်စေဖို့ လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၉) ခု - Hello Sayarwon
Update Date ဇွန် 20, 2020 .2mins read
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အအေးမိတာနဲ့တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကလည်းအများသားနော်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ခံအားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေများနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေရသူတွေအနေနဲ့ ဖျားတာနာတာကို ကြုံတွေ့ရမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ဖျားနာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုး အမြန်သက်သာအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်း (၉)ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖျားနာတဲ့ဝေဒနာကို စတင်ခံစားရပြီလို့ထင်တာနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေမယ့် အစားအစာတွေစားပါ။ ဗီတာမင်စီသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ နောက်တစ်ချက်က ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းအနားယူပေးပါ။ ဒီလိုတွေလုပ်ပေးတာက အဖျားကိုပိုမဆိုးလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်မြန်မြန်လည်းသက်သာစေပါတယ်။
နေမကောင်းတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းက အရေးကြီးသလို နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နှင်းကာကွယ်ပြီးဖြစ်စေမယ့်အပြင် စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတာကြောင့် အဖျားမြန်မြန်သက်သာစေမှာ အသေအချာပါ။
ရေနွေးနဲ့ ဆားခပ်နွေးနွေးလေးသုံးပြီး အာလုတ်ကျင်းပေးပါ
အဖျားပိုးကြောင့် လည်ချောင်းနာတာ၊နှာခေါင်းပိတ်တာတွေဖြစ်တာက နောက်ဆက်တွဲ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ရေနွေးပူပူထဲကို ဆားထည့်ပြီးခပ်နွေးနွေးလေးဖြစ်လာတဲ့အခါ ဆားရည်နဲ့အာလုတ်ကျင်းပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက နှာခေါင်းနဲ့လည်ချောင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးရာရောက်ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာတစ်ခုက ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူပေးဖို့ပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက ကိုယ်ခံအားစနစ်က အအေးမိတုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာ အများကြီးအထောက်အကူရစေပြီး အဖျားကိုမြန်မြန်သက်သာစေပါတယ်။
အအေးမိဖျားနာဖြစ်တဲ့အခါ တော်တော်များများက ရေမချိုးနဲ့ ရေမထိနဲ့ အဖျားတာရှည်မယ်လို့ပြောကြတာကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီအယူအဆက အပြည့်အဝမမှန်ပါဘူး။ နေမကောင်းတဲ့အခါ နှာခေါင်းပိတ်တာမျိုး၊ တုပ်ကွေးကြောင့် ငြီးစီစီဖြစ်တာမျိုးခံစားရမယ်ဆိုရင်ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ရေချိုးလိုက်ပါ။ရေနွေးငွေ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းသွားပြီး လန်းဆန်းသွားစေမှာပါ။
နေမကောင်းတဲ့အခါ အင်္ကျီအထူကြီးတွေ ဝတ်မိတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ချွေးထွက်လွန်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်းတာ၊ချွေးထွက်များပြီး ချွေးနဲ့အအေးပတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေမကောင်းတဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနေရမယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းထူတဲ့ အဝတ်အစားတွေမဝတ်ဆင်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ချည်သားအင်္ကျီလက်ရှည်လေးတွေကိုပဲ ဝတ်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ အစာမကြေမှာကိုစိုးရိမ်ပြီး မစားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးပေးမှ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ပြီး ဖျားနာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အဖျားမြန်မြန်သက်သာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
အအေးမိဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မြန်သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေစေဖို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဖျားဝင်လာတဲ့အခါ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုက အလွယ်တကူဖြစ်လာပါတယ်။ နေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါ အစားသိပ်မစားဖြစ်တော့သလို ရေတွေသိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဖျားတဲ့အခါ ရေများများသောက်ပေးမှ ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလို ဝမ်းမချုပ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရောဂါတွေ၊ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းတဲ့အခါ အခြားဘာမှမသောက်နိုင်ရင်တောင် ရေများများသောက်ပေးပါ။
နေမကောင်းပေမယ့်လည်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို လျစ်လျူရှုထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို ဂရုမစိုက်ဘဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားတွေပြန့်နှံ့ပြီး အဖျားတာရှည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေပြန့်ပွားကူးစက်တာမဖြစ်စေဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ခြေလက်တွေကို သန့်စင်အောင်ထားပါ။
ဒီလိုတွေလုပ်နေပေမယ့် အဖျားက မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့ပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင် အဖျားအလွယ်တကူမဝင်ရောက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့က အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးဖို့လိုသလို အိပ်ချိန်ပြည့်ဝနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
သင်ဟာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး မကြာခဏဖျားနာတတ်တဲ့သူလား။ ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်မှာပါ
တစ်ခါတလေ မျက်လုံးအောက်နားမှာ အဖြူရောင် အဆီဖု သေးသေးလေးတွေ ထွက်လာတာကို ကြုံဖူးမှာပါ။ ညှစ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဒါကို Miliaလို့ ခေါ်ပါတယ်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, အခြားအရေပြားပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 27, 2021 .2mins read
ငရုတ်သီးမှုန့် မှာ ပါတဲ့ မှိုက အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုပါ။ ငရုတ်သီးပါတဲ့ အဖလာတောက်စင်က အသည်းကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါများ, အသည်းကင်ဆာ စက်တင်ဘာ 27, 2021 .3mins read
အစားအစာတွေကို အေးခဲတာက အာဟာရတန်ဖိုး ပျက်စေသလား......... တကယ်လို့သာ ဒီလိုမျိုး အာဟာရတန်ဖိုး လျော့မယ်၊ ပျက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာ 27, 2021 .2mins read
အေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ myths များစွာ က ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ။ ကိုယ်တိုင်ရော ဘာတွေများ မှားသိထားသေးလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ စက်တင်ဘာ 27, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 28, 2021 .3mins read
ဘေဘီလေး ဖျားနေချိန်မှာ မေမေက ဘာတွေ စားပေးသင့်လဲ ……..